Zikhokelela njani iiNtloko ngokuThengisa ngokuZenzekelayo | Martech Zone
Zikhokelwa njani iiNtloko ngokuThengisa okuzenzekelayo
NgoLwesithathu, Aprili 22, 2015 NgoLwesithathu, Aprili 22, 2015 Douglas Karr
Siye Ibhalwe nzulu malunga nentengiso ezenzekelayo amacebo, zeziphi izinto ezibaluleke kakhulu, kunye nemiceli mngeni ngokuphumeza ezo ndlela zokuqhuba zikhokelela.
Iinjongo zentengiso ezenzekelayo kukuvala umsantsa obalulekileyo phakathi kwentengiso kunye nentengiso, ekugqibeleni ukuqhuba kukhokelela kwisebe lezentengiso ngexesha elifanelekileyo. Oku kunceda ukuphucula umgangatho okhokelayo kunye nokunciphisa iinzame ezifunekayo zokuvala intengiso. Ekugqibeleni oku kunyusa inani lezikhokelo, ixabiso lesikhokelo, ngelixa kuncitshiswa iindleko zizonke ngokukhokela.
Uphando lwamva nje lwabasebenzisi bokuthengisa abazenzekelayo baqaqambisa amandla okulinganisa ngokuchanekileyo iziphumo kunye nokonyuka okubonakalayo kwizikhokelo njengezibonelelo eziphambili zesoftware. Uphando lokuqala olusuka Isifundo sentengiso esizenzekelayo seVenturebeat Ibonisa ukuba icandelo lesibini elinzima kakhulu kwintengiso ezenzekelayo yeengcali zeshishini kukusebenza ngendlela le software elingana ngayo nombutho wabo. Eyokuqala yayisahlula phakathi kweemveliso.
Le infographic ivela Ingcebiso ngeTekhnoloji, indawo yamashishini yokufumanisa kunye nophando lwetekhnoloji.
tags: isizukulwana esikhokelayokukhokelelaukuzenzekela ngokuzenzekelayoiqhinga lokuthengisa ngokuzenzekelayoisikhokelo sentengiso
Ulujonga njani uLwakhiwo lweDomain yakho ngegama elingundoqo kwiFowuni nakwiDesktop
Izibonelelo ezi-6 zeForamu enophawu kunye noLuntu oluKwi-Intanethi